24 ngesonto yokukhulelwa kuphawula ukuphela senyanga yokukhulelwa wesibili. Omama esizayo nakanjani sikhathi esijabulisayo lapho ungakwazi nokujabulela wonke umcebo wakhe.
24 Emaviki abakhulelwe: Kwenzekani ingane? Ngalesi sikhathi engimbumbile zonke izitho ezinkulu izinhlelo, unjalo ukuthuthukiswa kwabo okwengeziwe kanye ngcono.
Fetus ngaleso sikhathi kakade ukala mayelana 500 - 600 amagremu, nobude umzimba yayo phezulu izibunu ivuliwe isilinganiso 21 - 30 amasentimitha.
Ngaphandle, i-fetus iyafana izingane ongakazalwa. izicucu zesikhumba sakhe namanje ukushwabana uma amafutha okwamanje. Nokho, umzimba we-fetus ngenkuthalo ekuqongeleleni okuthiwa amafutha ensundu, okuyinto aqoqana ngaphansi izindwani ehlombe esiswini sengane. Kuyinto yalolu ketshezi futhi kuyoba angumtfombo amandla emva kokubeletha, lapho umzimba kamama namanje asisho ukukhiqiza ubisi olwanele.
24 ngesonto sokukhulelwa wukuthi ingane kungase kudingeke ukuba uvale futhi vula amehlo akho, uzizwa iphunga, ukunambitha, ukuzwa imisindo. Kulesi sigaba ngoba ikusasa lalowo ingane iphupho kubaluleke kakhulu, okuyinto Uthatha cishe 16 - 20 amahora ngosuku. Ezinye izindaba zika-umbungu iyasebenza ngokwanele.
Lwathi luphela kulelisonto ingane kakade unelungelo abelethe isikhundla namanga esiphendula esibhekisa phansi. Ngaphezu kwalokho, kule nkathi athoma ukubaleka futhi izindlala zamafutha sebaceous. ingane isikhumba limbozwa ekhethekile isikhumba amafutha ukuthi zivikela umonakalo mechanical ukushaqeka.
umama okhulelwe kuwusizo ukwazi ukuthi Emasontweni onke okukhulelwa 24 - lokhu yenkathi udinga uqaphele. Iqiniso lokuthi ingane iyakwazi sizizwe ngendlela efanayo njengoba umama. Uma uhlangabezana ukucindezeleka, intukuthelo, noma ukwethuka nje, isimo sakho idluliselwa futhi ingane.
24 Emaviki abakhulelwe: Kwenzekani emzimbeni kamama? Kule nkathi, uzoqala ngokushesha athole isisindo, ngisho noma okwamanje ungeyena kakhulu ngcono kakhulu.
24 ngesonto okukhulelwa - zazikujabulela, ngakho njengoba isicanucanu ingasekho nhlobo, futhi isisu akuyona omkhulu ukuze ibakhathaze. Nokho, abanye abesifazane esekhala iqolo. Lona ngumphumela imisipha ebuthaka ukuthi ayakhelwe okuthwala isisindo ezengeziwe. Kulokhu, uzowathola zisebenzisa kangcono ngebhandeshi zabakhulelwe.
Movement of the ingane isivele abahlukene futhi akakwazi kudidaniswe lutho. Ngaphezu kwalokho, abesifazane abaningi babhekana enjalo inkinga ezingemnandi njengoba isilungulela. Iqiniso lokuthi ivolumu kwesibeletho ukhula phansi, izindonga zawo sebeqala ngawakhamela izibilini ingcindezi esiswini. Uma njalo bahlushwe isilungulela, uthintane udokotela wezifo zabesifazane - ke imithi izidakamizwa ayinangozi.
Ngaphezu kwalokho, lesi sikhathi ungase futhi zenzeka toxicosis yesibili. Abesifazane abakhulelwe abahlushwa ukuvuvukala eziphikelelayo. Uma kakhulu ngokucijile waqala ukuze isisindo sakhe sithi, kodwa une nemilenze avuvukele kungenzeka kwezicubu zomzimba wakho uqale buthelela uketshezi. Qiniseka ukuthi utshele udokotela wakho.
Ngezinye ngesonto 24 okukhulelwa zingavela "ukuqeqeshwa" zokuxabana ahambisana lesizalo ukungezwani futhi umdwebo izinhlungu esiswini. Lokhu kuvamile futhi uma kungukuthi ephelezelwa osenyameni olunegazi futhi sebuhlungwini obunzima, ke ungakhathazeki.
24 Emaviki abakhulelwe: izinkinga kungenzeka. Kulesi sigaba, abanye omama ibhekene esingamahlalakhona wesibeletho. Iqiniso lokuthi wesibeletho ayikwazi ukumelana amaphaphu kanye nokwenzeka nokuguqulwa isisu , ngaphandle izimpawu. Kulokhu, lo dokotela ngeke agqoke izicubu kwesibeletho a yaseZimbabwe ambalwa.
Enye inkinga - a previa placenta. Akukho okungalungile ngalokho, kodwa owesifazane okhulelwe kufanele niphumule ngangokunokwenzeka, hhayi ukuthi siphakamise izinsimbi ezisindayo futhi sizame hhayi kube novalo.
Ultrasound Emasontweni onke okukhulelwa 24 ozikhethela, kodwa ingasetshenziswa ukucacisa khona izinkinga ezifana engalungile isikhundla umbungu nendawo okungavamile placenta.
Ukukhulelwa ne-iodine. ukuhlolwa Iodine ukukhulelwa
Indian izingubo - owesilisa nowesifazane. ingubo kazwelonke Indian
Amatshwayo phezu PHP: string enombolweni kungokufanayo a nalokho
Uyini inkositini? Ukufunda kwi-Inthanethi Slang
Ujamu Orange - dessert enkulu
Yasezindongeni elingaphakathi: intengo nezithombe
Umfelokazi omnyama. Legend and Real